Boolis Weeraray Guriga Xaaska Riyad Mahrez - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Boolis Weeraray Guriga Xaaska Riyad Mahrez
Boolis Weeraray Guriga Xaaska Riyad Mahrez
Muuqaal la baahiyay ayaa muujinayay in xaaska Riyad Mahrez oo lagu magacaabo Rita Johal iinay gurigeeda ku yaala magaalada London ay soo weerareen boliiska ka dib markii ay si sharci darro ah xaflad ay dad badani ka soo qeyb galeen u dhigatay xilli xayiraad la xiriirta ka hortaga Korona Fayras lagu soo rogay dalka oo dhan.
Boliiska ayaa su’aalo weydiiyay xaaska Riyad Mahrez iyo dadkii kale ee xaflada ka soo qeyb galay ka hor inta aysan u jarin tikidho ganaax ah madaama ay jabiyeen sharciga Korona Fayras ee UK.
Gabadhaan moodalka ah ayaa ugu yaraan gurigeeda ku casuuntay dad badan habeenkii Jimcaha iyadoo muuqaalo xaflada la xiriirta soo dhigtay bogeeda Instagram oo ay ku leedahay ku dhow nus milyan taageerayaal ah.
Ugu yaraan 10 boliis ah ayaa tagay guriga iyagoo su’aalo weydiinayay dadka xaflada yimid xilli ay sharcidarro tahay in dad badan ay hal meel isagu yimaadaan.
Waxaa la maqlayaa Rita oo weydiineysaa boliiska: “Nimanyahow ma noloshii sidaan ayay noqotay? Miyaydan jecleyn inaan xafladeysaan?”
Gabar ka tirsan boliiska ayaa la maqlayay iyadoo u sheegaysa: “Maya ma jeclin inaan xafladeyno xilli lagu jiro cudur faafa oo dilaa ah.”
Previous articleKulamo ka tirsan Horyaalka Soomaaliya oo maanta la ciyaarayo
Next articleMas’uul ka tirsan Maamulka Puntland oo is casilay
Kulamo ka tirsan Horyaalka Soomaaliya oo maanta la ciyaarayo